हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टको मर्ज आउने साता सम्झौता हुने
हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच आउने साता मर्ज सम्वन्धी सम्झौता (एमओयू)मा हस्ताक्षर हुने भएको छ। आज दुबै बैंकको मर्जर कमिटीको बैठक बसेको छ। ‘मर्जर कमिटीको बैठक भइरहेको छ, कमिटीका छलफल सहमति नजिक पुगेकाले आउने साता मर्ज सम्वन्धी सम्झौता हुने छ’ स्रोतले भन्यो। सम्भवतः १४ गते मंगलबार नै मर्जसम्वन्धी सम्झौता हुने स्रोतको दावी छ।
मर्जर कमिटीको बैठकपछि हिमालयन बैंकको बोर्ड बैठकले मर्ज सम्वन्धी निर्णय पारित गर्नेछ। स्वाप रेसियो नै १ बराबर १ को रूपमा रहने भएको छ। यसको अर्थ, दुईमध्ये जुन बैंकको सेयर जति छ, लगानीकर्ताले मर्जपछिको बैंकको सेयर त्यति नै पाउने छन्। एमओयुका लागि डकुमेन्ट तयार भएको छ। मर्जपछिको हिमालयन-इन्भेष्टमेन्ट बैंक सबभन्दा ठूलो हुनेछ। दुवै बैंकको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण समायोजन गर्दा चुक्ता पुँजी करिब २५ अर्ब हुनेछ, जुन हालका वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा सबभन्दा उच्च हो।
त्यस्तै कर्जा प्रवाह साढे दुई खर्ब हुनेछ भने निक्षेप संकलन तीन खर्ब बराबरको हुन्छ। बैंकको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे रहनेछन्। मर्जपछि पाकिस्तानको हबिबले लिएको हिमालयनको सेयर बिक्री हुने भएको छ। बैंकमा कुल सेयर लगानीमध्ये हबिबको २० प्रतिशत स्वामित्व छ। कम्पनीको कुल सेयर संख्या १० करोड ६८ लाख ४४ हजार ८ हुन आउँछ।
यस हिसावले २ करोड १३ लाख ६८ हजार ८०१ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गरेर हबिबले करिब ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बढी रकम लैजाँदै छ। हबिबले प्रतिकित्ता करिब २८३ रुपैयाँका दरले आफ्नो संस्थापक सेयर बिक्री गर्न खोजेको छ। हबिबपछि हिमालयन बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वामित्व सबैभन्दा धेरै १४ प्रतिशत छ।
त्यस्तै एन ट्रेडिङ कम्पनीको १२. ७१, म्युचुल ट्रेडिङ कम्पनीको ११. ८५, आभा इन्टरनेसनलको ११. ३८, छाया इन्टरनेसनलको ८.८९ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ। व्यक्तिगततर्फबाट शशिकान्त अग्रवालको सबैभन्दा धेरै २.६५ प्रतिशत सेयर छ। मर्जको सम्झौता भए पनि हबिबको सेयर बिक्रीका लागि कुनै असर पर्ने छैन। मर्जपछि सेयर बिक्री गर्नलाई अझ सहज हुनेछ। किनकि इन्भेष्टमेन्टका हालका संस्थापक सेयरधनीले समेत मर्जपछि हबिबको सेयर खरिद गर्न सक्छन्।